Hataka voavaly – FJKM Ambavahadimitafo Hataka voavaly |
Indraindray dia toa misalasala ny olona sasany na mamaly vavaka tokoa Andriamanitra, na tsia. Misy kosa indray mihevitra fa izay anjara tsy maintsy ho tonga, na mivavaka isika na tsy mivavaka. Indro ary misy tantara kely mampieritreritra na misy antony ihany ny vavaka na tsia.
Vao taona vitsivitsy lasa izay, tany New York any Amerika, dia nisy vehivavy atao hoe Madama Whittemore, izay nikely aina tamin’ny fanasoavana namana sy fitaomana olona ho an’i Kristy, ka tonga nalaza hatraiza hatraiza ny asan’izany vehivavy izany.
Tany Alemaina kosa dia nisy olona mivady izay nanana zanakavavy tokana naditra atao hoe Margerita C., izay tsy nety tamana tao amin-dray aman-dreniny intsony, fa nandositra ka tsy hita izay nalehany. Kristianina izy mivady ireto, ary ory dia ory tokoa noho izany toetran-janany izany, ka mandrakariva no mivavaka hanovan’andriamanitra ny fony sy hahatafaverina azy ao an-tranony indray.
Tamin’ny indray andro dia nisy nandrenesan’izy mivady fa any Amerika, hono, ny zanany ; ary noho ny fahalalany ny laza sy ny asan’i Madama Whittemore, dia nanoratra izao taratasy izao ho azy izy :
– Tompokovavy malala! Noho ny fitiavan’Andriamanitra dia miangavy anao indrindra aho mba hitady ny zanakay vavy aty Amerika. Nandositra niala teto aminay izy, ka mila hahavaky ny fon’ny reniny efa antitra ny mieritreritra azy, ary mila hahavery ny saiko izaho rainy. Ny anarany dia Margerita C., ka raha hitanao izy dia lazao azy fa mbola tsy miova ny fitiavanay azy, ka maniry azy indrindra hiverina, sady vonona handray azy amin-kafaliana lehibe. Ary noho ny fahalalanay ny toetrao sy ny asanao, tompokovavy, dia ataonay fa ho sitrakao ny hahatanteraka ity hatakay ity. Veloma, etc. C…
Nony voarain’i Madama Whittemore ity taratasy fangatahana hitady zazavavy anankiray any Amerika ity, dia nisalasala be ihany izy ka saiky tsy hihevitra azy akory, satria fangatahana malalaka loatra, tsy misy fanazavana na inona na inona afa-tsy ny anarany sy ny Amerika ihany, ka hoy izy anakam-po : « Efa vonton’alahelo loatra lahy ny fon’ilay olona nanoratra ity, ka hadinony mihitsy ny hilaza izay andinindininy hahafantarana ny zanany. »
Raha nieritreritra ny halalak’i Amerika anefa izy dia mby tao an-tsainy niaraka tamin’izay koa ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra, ka toa nanome fanantenana azy hahitany lalana hahazoany manatontosa ity hataka sarotra ity; ka dia nandohalika izy mba hahitana indray io zazavavy mampalahelo io.
Ny harivarivan’iny andro iny ihany, dia naharay fangatahana hafa indray izy, dia ny mba handaha-teny ao amin’ny fivoriana lehibe ao amin’ny tanàna anankiray ao akaikiny. Noho ny fahatampoky ny fangatahana, sy noho ny habetsahan’ny raharaha teo an-tanany, dia efa saiky handà io fangatahana io koa izy, nefa nisy eritreritra tao am-pony, izay nanery azy, fa feon’ny Tompo no niantso azy hankany, ka dia nanapa-kevitra handeha ihany izy.
Feno olona ilay Tranofiangonana, ary nafana tokoa ny fotoam-pivavahana, ka tsaroana ho niasa tao ny Fanahy Masina. Raha mbola nandaha-teny ilay vehivavy, dia nahatsikaritra zazavavy telo hafahafa fitafiana nipetraka tery akaikin’ny varavarana, ary tazany fa ilay anankiray tamin’izy ireo dia voasintona mihitsy hihaino tsara ny lahateniny, ka toa velona eritreritra fatratra amin’izato endrika mampiseho fangoraham-po sy alahelo.
Vantany vao tapitra ny fotoana, hoy Madama, dia tsy nisy voahevitro intsony ny manodidina ahy rehetra, fa niezaka aho hanatona ilay zazavavy teo sy hitaona azy ho amin’ny Mpamonjy. Noraisin’i Madama ny tanany sady nanontaniany hoe izy :
« Anaka, moa efa nahita ahy va hianao taloha? »
« Eny, » hoy razazavavy
» fa efa notsaboinao andro vitsivitsy aho herintaona lasa izay »
Ary raha nanontany ny anarany izy dia gaga raha nilazany fa Margerita C. no anarany, sady nitantara ny toe-javatra rehetra nataony sy nihatra taminy izy.
Tamin’izay Madama Whittemore dia feno fisaorana lehibe an’Andriamanitra raha nanambara tamin-drazazavavy kosa ny fangatahana voarainy avy amin-drainy aman-dreniny, sy ny mbola fanantenan’ny fianakaviany handray azy amim-pifaliana indray.
Andro vitsivitsy taorian’izany, dia tafaverina tany amin-drainy aman-dreniny razazavavy, ka tanteraka tokoa tao amin’ilay tokantrano anankiray tany Alemaina ilay teny mamy manao hoe : « Aoka isika hifaly, fa ity zanako ity, efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray.